Cabdi Cali Bacal Waan Oo Germany Lagu Dhacay SAWIRO+VIDEO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Cabdi Cali Bacal Waan Oo Germany Lagu Dhacay SAWIRO+VIDEO
Fanaanka caanka ah ee Soomaaliyeed Abdi Ali Bacal-waan ayaa waxaa uu markii ugu horeysay shaaca ka qaaday in dhac dhaqaale loogu geystay wadanka Jarmalka, kadib markii lacag looga qaaday waan ku daaweyneynaa.
Bacal-waan oo lacagtan bixiyey xilligii uu Nairobi joogay ayaa waxaa ka qaaday raga iska leh hay’adda Danyar Daryeel oo sheegata inay vise caafimaad usoo saarto dadka doonayo daaweynta Jarmalka, kadibna ka qaadata lacago horumaris ah. Waxaana Bacalwaan oo halis qatar ah ku jiray dad ka socda ay la soo xiriireen hay’addan oo ka qaaday lacag, kadibna aysan usoo sameyn wixii uu doonayey.
Fanaankan oo iskiis markii danbe u yimid Jarmalka islamarkaana daaweyn caafimaad oo kale lagu sameeyey ayaa waxaa uu xirir la sameeyey hay’addii lacagta ka qaadatay ee ninka Soomaaliga ah uu iska lahaa, waxaana uu ka waayey wax lacagtiisa ka siiyo, iyaddoo uu isku dayey inuu rag badan oo qaraabadiisa ah kala xiriiro balse waxba laga qaban waayey.
Wariye Abdirashiid Ali oo ka shaqeeya Universal TV una jooga dalka Jarmalka ayaa wareysi uu fanaanka Qaranka uga hadlayo dhibkaasi loo geystay kasoo qaaday, waxaana uu Bacal-waan sheegay in lacagtiisa uu ninkan uu heysto u dhiibay Mr, Maaxaay oo si weyn loogu yaqaano wax u qabashada caruurta iyo haweenka dhiban.
” Waxaa lacagteyda oo dhan 1,500 “Kun iyo Shan boqol oo Euro” oo waliba ay dad Soomaaliyeed ii aruuriyeen u dhiibay ninkan hadda iga heysta walaalka la yaqaan ee Maaxaay, waxaana cidkasta ay kasoo saari weysay ninkaasi lacagteyda” ayuu yiri Fanaan Bacal-waan.
Dhinaca kale waxaa uu sheegay inuu hadda dadaal badan ugu jiro sidii uu lacagtiisa kusoo ceshan lahaa, haddii aan la siina uu sameyn doono wixii isaga la gudboon, maadaama la joogo dal sharci uu ka jiro , islamarkaana uu heysto warqadihii cadeynta ahaa ee lacagta looga qaatay.
” Haddii aan lacagteyda helin waxaan cadeynayaa in aan wixii ila gudboon sameeyo, maxaa yeelay ninkan xitaa Ugaaskii Abgaal oo arrinteyda galay oo isaga la hadlay wax waa uu ka qaban waayey” ayuu yiri Abdi Ali Bacal-waan.